19 | October | 2014 | Danya Wadi
Sake attack: မြွေကတိရိစ္ဆာန် ကိုဖမ်းစားခြင်း
By danyawadi October 19, 2014 Leaveacomment
Wallaby joey ‘Trinity’ rescued near Cairns after python tried to eat it and it’s mother (but it didn’t go so well for mum) A WALLABY joey has been rescued afteraterrifying snake attack at Trinity Beach this morning. A python had been trying to digest the joey’s dead mother, but let go after struggling […]
ကျုပ်(ဗိုလ်ချုပ်) က စ ကား မ ပြော တဲ့ လူ … ပြော မယ့် ပြော တော့ လည်း မ နား တမ်း ပြော တာ ….
“ တို့ဗမာအစည်းအရုံး ဌာနချုပ်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး သခင်အောင်ဆန်းသည် ဇလွန် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာခဲ့၏။ ညီလာခံ ကျင်းပနေစဉ် ရက်များအတွင်း၌ ကိုယ်စားလှယ် များ တည်းခိုရန် ငှားရမ်းထားသော အိမ်ကြီးတစ်လုံး၏ အပေါ်ထပ်တွင် သခင်အောင်ဆန်းပါ တည်းခိုနေထိုင်ပြီး ညဘက်တွင် ကျွန်တော်တို့တတွေနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးခြင်း ၊ စပ်မိစပ်ရာ စကားများ ပြောဆိုခြင်းပြုပြီး ညဥ့်နက်မှပင် အိပ်လေ့ရှိသည်။ တစ်ညတွင် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးလျှင် သခင်အောင်ဆန်းက စကားပြောလေသည်။ “ ကျွန်တော့်ကို စကား မပြောတဲ့လူ ၊ လူတွေနဲ့ အကျွမ်းတဝင် ပြောပြောဆိုဆိုမနေတဲ့လူလို့ ပြောကြတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ့အခါကျရင် သိပ်ကို ပြောတာ ´´ ဟူ၍ ထို ည တွင် သခင်အောင်ဆန်းက […]
သမ္မတအိုဘားမား၏ခရီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်တွင် တည်းခိုရန် ဟိုတယ် သုံးလုံးကို အဆို ပြုထား ဟုဆို
By အောင်သူရ Sun, 2014-10-19 06:49 အာဆီယံအစည်းအဝေး သို့တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ သို့လာရောက်မည့် အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား တည်းခိုရန် နေပြည်တော်ရှိ ဧဒင် ကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင်သော ဟိုတယ် နှစ်လုံးနှင့် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီပိုင် ဟိုတယ်တို့တွင် စီစဉ်ပေးရန် မြန် မာအစိုးရထံ တောင်းဆိုထား ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အိုဘားမား တည်းခိုရန် တောင်းဆိုထားသည့် Hilton Nay Pyi Taw နှင့် သင်္ဂဟဟိုတယ်တို့ မှာ ဧဒင်ကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင်ဟိုတယ် များဖြစ်ပြီး Kempinski Hotel မှာ ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီအုပ်စုက ပိုင်ဆိုင် သော ဟိုတယ်များဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီအုပ်စုပိုင် ဟိုတယ်အား ဂျာမနီအခြေစိုက် Kempinski ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဧဒင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဟိုတယ် […]
လက်မခံငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ အိုဘားမားရဲ့ ခရက်ဒစ်ကတ်
Sunday, October 19, 2014 အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားဟာ နယူးယောက်မြို့က စားသောက်ဆိုင်တခုမှာ ခရက်ဒစ်ကတ် ( အကြွေး ဝယ် ကတ်) နဲ့ ပိုက်ဆံ ရှင်းတာမှာ ဆိုင်က စားပွဲထိုးက သူ့ကတ်ကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၊ ဓာတ်ပုံ- NBC News စားပွဲထိုးက လက်မခံရတာဟာ ခရက်ဒစ်ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်က လက်မခံခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လ က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့ အိုဘားမားတယောက် နယူးယောက်မြိုကို သွားရင်း စားသောက်ဆိုင်တခုက သူ့ခရက်ဒစ်ကတ်ငြင်းပယ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း Consumer Financial Protection Bureau မှာ မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုခဲ့တာကို ဝါရှင် တန်ပို့စ်သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ သူ့ကတ် […]
၀န်ကြီးဟောင်းဦးဆန်းဆင့်ထောင်(၁၃) နှစ်နှင့် ငွေ ဒဏ် တစ် သိန်း ချ ခံ ရမှု အယူခံ ၀င်မည်
သူဇာ| October 17, 2014 ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှု၊ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသော သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်ကို အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိခရိုင်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ်နှင့် ငွေဒဏ် တသိန်းချမှတ်လိုက်ပြီး ချမှတ်ခံလိုက်ရသော ပြစ်ဒဏ်များအတွက် အယူခံဝင်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်ကို ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှု ပုဒ်မ ၄၀၉ အတွက် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်၊ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄(က) အတွက် ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်နှင့် ငွေဒဏ် တသိန်းကျပ်ဖြင့် နေပြည်တော် ဒက္ခိဏ သီရီခရိုင်တရားရုံးက ယနေ့ရုံချိန်းတွင် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ငွေဒဏ် တသိန်းကျပ် မပေးဆောင်လျှင် ထပ်မံ၍ ထောင် […]
ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပရေး ကိုသာ ဒဲရစ်မစ်ချယ်လ် က ပြောကြား
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်သင့်သည် ဆိုခြင်းထက် ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ် အတိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကျင်းပရေးကိုသာ အမေရိကန်က လိုလားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်လ်က ပြောကြား ================================================ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် ဦးသိန်းစိန် သို့မဟုတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စသည်ဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ရွေးချယ် လိုခြင်းမရှိဘဲ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်း စဉ်အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားရေးကိုသာလိုလားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်လ်က ပြောကြား လိုက်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၅၉(စ)နှင့် ပုဒ်မ-၄၃၆တို့ကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိပါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် မည်ကဲ့ သို့သဘောထားတုံ့ပြန်မည် လဲဟူသော ဒီမိုကရေစီ တူဒေး သတင်းစာ၏ အမေးကို အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးက ယခုကဲ့သို့ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့က ဦးသိန်းစိန်ရယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရယ်လို့ရွေးချယ် […]
Rakhine extremists blocked WFP’s access to the few remaining Rohingya villages in Rathedaung Township leading the hundreds of innocent Rohingyas to face starvation, according toasource of WFP. Post the state-sponsored violence against ethnic Rohingya in 2012, only few Rohingya villages in Rathedaung Township survived from destruction. Two of them are Anauk-Pyin village and […]